Amadivayisi weselula | December 2019
Main Amadivayisi weselula
Iphutha i-com.android.phone ku-android - indlela yokulungisa
Enye yeziphambeko ezivamile kuma-smartphones e-Android "Kuvele iphutha kuhlelo lokusebenza lwe-com.android.phone" noma "Inqubo ye-com.android.phone ivaliwe", evame ukuvela lapho kwenziwa izingcingo, ebiza umshayeli, futhi ngezinye izikhathi ngezikhathi ezithile. Le imininingwane yokufundisa indlela yokulungisa iphutha le-com.android.
I-Android 6 - yini entsha?
Ngesonto elidlule, abanikazi bokuqala be-Smartphones namaphilisi baqala ukuthola izibuyekezo ku-Android 6 Marshmallow, ngithole futhi ngigijimela ukwabelana ngezici ezintsha ze-OS, futhi maduzane kufanele kufike kumadivayisi amaningi omusha we-Sony, LG, HTC nama-Motorola. Okuhlangenwe nakho komsebenzisi kwenguqulo yangaphambilini akuyona into engcono kakhulu.
Iphutha ekuphambeni iphakheji ku-Android
Enye yezinkinga ezingabhekana nazo uma ufaka uhlelo lokusebenza lwe-apk ku-Android umlayezo: "Iphutha le-Syntax" liphutha lapho kuhlaziywa iphakheji ngenkinobho eyodwa ye-Ok (i-Parse Error. Kukhona ukuphazamisa iphakheji ku-interface yamaNgisi). Kumsebenzisi we-novice, umlayezo onjalo ungase ungacacisi ngokuphelele futhi, ngokufanele, awucaci ukuthi ungayilungisa kanjani.
Iphutha lesicelo ligcinwe noma uhlelo lokusebenza lugcinwe ku-Android
Enye yezinkinga ezingabhekana nazo uma usebenzisa ifoni noma ithebhulethi ye-Android umlayezo ochaza ukuthi ezinye izinhlelo zokusebenza ziyeke noma "Ngeshwa, uhlelo lokusebenza luyekile" (futhi, ngeshwa, inqubo imisiwe). Iphutha lingazibonakalisa ezihlukahlukene zezinguqulo ze-Android, ku-Samsung, i-Sony Xperia, i-LG, i-Lenovo, i-Huawei namanye amafoni.
Iphutha RH-01 lapho sithola idatha kusuka kuseva ku-Google Play Isitolo ku-Android - indlela yokulungisa
Enye yeziphambeko ezivame kakhulu ku-Android kuyiphutha ku-Google Play Isitolo lapho uthola idatha kusuka kuseva ye-RH-01. Iphutha lingabangelwa kokubili ukungasebenzi kahle kwezinsizakalo ze-Google Play nezinye izici: izilungiselelo zesistimu engalungile noma izici ze-firmware (uma usebenzisa ama-ROM wangokwezifiso nama-emulator we-Android).
Indlela yokusebenzisa i-Android njengekhamera yokuhlola ividiyo ye-IP
Uma wena, kanye nokuthi nginamafoni ase-Android angasetshenzisiwe noma ama-Smartphones angenakubasebenzi (isibonelo, nge-screen ephukile), kungenzeka ukuthi bavele nezicelo eziwusizo. Omunye wabo - ukusetshenziswa kwefoni ye-Android njengekhamera ye-IP kuzoxoxwa kulesi sihloko. Kufanele kube yini umphumela: i-IP yekhamera yamahhala yokubhekwa kwevidiyo, engabonwa nge-intanethi, isebenze, kuhlanganise nokunyakaza kwesakhiwo, kwesinye sezinketho - ukulondoloza amavesi ngokunyakaza kwisitoreji sefu.
Iphutha lokuqinisekiswa kwe-Wi-Fi kuthebhulethi nocingo
Enye yezinkinga ezivame kakhulu lapho uxhuma ifoni ye-Android noma ithebhulethi ku-Wi-Fi iphutha lokufakazela ubuqiniso, noma nje "ukuvikelwa, i-WPA / WPA2 ukuvikelwa" ngemuva kokuzama ukuxhuma kunethiwekhi engenazintambo. Kulesi sihloko, ngizokhuluma ngezindlela engazi ngazo ukulungisa inkinga yokuqinisekisa futhi namanje uxhumeke kwi-Intanethi esatshalaliswe ngumzila wakho we-Wi-Fi, kanye nokuthi lokhu kuziphatha kungabangelwa yini.
I-Android ayiboni imemori khadi le-Micro SD - ukuthi ungalungisa kanjani
Enye yezinkinga ezingase zihlangabezane ngokufaka imemori khadi ye-Micro SD kufoni noma ithebhulethi - i-Android nje ayiboni imemori khadi noma ibonisa umlayezo ochaza ukuthi ikhadi le-SD alisebenzi (idivayisi yekhadi le-SD ibonakalisiwe). Leli bhukwana lichaza ngokuningiliziwe izimbangela ezikhona zenkinga nokuthi ungalungisa kanjani isimo uma imemori khadi ingasebenzi ngedivayisi yakho ye-Android.
Ukuguqa kwe-Android kutholiwe
Ukuqala nge-Android 6.0 Marshmallow, abanikazi bamafoni namaphilisi baqala ukuhlangana nephutha "Ukutholwa Okutholiwe", okusho ukuthi ukuze unikeze noma ukhansele imvume, vala ukukhubaza kuqala izinkinobho kanye ne "Vula Izilungiselelo Ezivulekile". Iphutha lingase livele ku-Android 6, 7, 8 no-9, kuvame ukutholakala kumadivayisi we-Samsung, LG, Nexus nePixel (kodwa angase avele kwamanye ama-Smartphones namaphilisi anezinguqulo zesistimu ecacisiwe).
Samsung Dex - isipiliyoni sami sokusebenzisa
I-Samsung DeX yigama lobuchwepheshe be-proprietary elikuvumela ukuthi usebenzise i-Samsung Galaxy S8 (S8 +), i-Galaxy S9 (S9 +), Qaphela amafoni angu-8 no-Note 9, kanye nethebhulethi ye-Tab S4 njengekhompyutha, ukuyixhuma kumqapha (efanelekayo ku-TV) usebenzisa idokodo elifanele -Station Station DeX noma DeX Pad, kanye nokusebenzisa ikhebula elilula le-USB-C-HDMI (kuphela i-Galaxy Note 9 nethebhulethi ye-Galaxy Tab S4).
Indlela yokuvula ukhiye wephethini engiyikhohlwe ku-Android
Ngikhohliwe iphethini futhi angazi ukuthi ngingenzani - ngibheke inani labasebenzisi be-Smartphones namaphilisi e-Android, wonke umuntu angabhekana nenkinga. Kule ncwadi, ngiqoqe zonke izindlela zokuvula iphethini kufoni noma kuthebulethi nge-Android. Kusetshenziselwa izinguqulo ze-Android 2.3, 4.4, 5.0 no-6.
Indlela yokudlulisa amafayela kusuka kwikhompyutha ukuya efonini ye-Android nangemuva
Ngokuvamile, angazi ukuthi lesi sihloko singasiza yini kumuntu, njengoba ukudlulisela amafoni efonini ngokuvamile akwenzi izinkinga. Noma kunjalo, ngiyaqala ukubhala ngakho, phakathi naleso sihloko ngizokhuluma ngalezi zinto ezilandelayo: Dlulisa amafayela phezu kwentambo nge-USB. Kungani amafayela angadluliswa nge-USB efonini ku-Windows XP (kwezinye izinhlobo).
Ungalanda kanjani i-apk kusuka ku-Google Play Isitolo
Ngezinye izikhathi kungadingeka ukulanda ifayela le-apk yesicelo se-Android kukhompyutheni yakho kusuka ku-Google Play Isitolo (hhayi kuphela), futhi hhayi nje uchofoze inkinobho ethi "Faka" esitolo sohlelo lokusebenza, isibonelo, ukuyifaka ku-emulator ye-Android. Kwezinye izimo, kungase kudingeke futhi ukulanda i-apk izinguqulo zangaphambilini zesicelo, kunokuba inguqulo yakamuva ithunyelwe yi-Google.
Indlela yokusebenzisa ifoni ye-Android noma ithebulethi njengegundane, ikhibhodi noma i-gamepad
Ngisanda kubhala isihloko sendlela yokuxhuma izithako ku-Android, kodwa manje ake sixoxe ngenqubo eguqukayo: usebenzisa amafoni we-Android namaphilisi njengekhibhodi, igundane, noma ngisho nenjabulo. Ngincoma ukuthi ufunde: zonke izihloko esakhiweni sesayithi le-Android (ukulawula okukude, i-Flash, amadivayisi wokuxhuma, nokuningi).
Bliss OS - I-Android 9 kukhompyutha
Ngaphambili kusayithi engivele ngibhale mayelana namathuba okufaka i-Android njengesevisi yokusebenza ephelele kwikhompyutha (ngokungafani nemimoya ye-Android, egijima "ngaphakathi" i-OS yamanje). Ungakwazi ukufaka i-Android x86 ehlanzekile noma ulungiselelwe ama-PC kanye ne-Remix OS laptops kwikhompyutha yakho, njengoba ichazwe lapha: Indlela yokufaka i-Android kuthebhulethi noma ikhompyutha.
Indlela yokuxhuma ikhibhodi, igundane nenjabulo kumathebulethi we-Android noma ifoni
Uhlelo lokusebenza lwe-Google Android lusekela ukusetshenziswa kwegundane, ikhibhodi, ngisho nomdlalo wezemidlalo (ukudlala injabulo). Amadivayisi amaningi we-Android, amaphilisi namafoni akuvumela ukuba uxhume izithako usebenzisa i-USB. Kweminye amadivaysi lapho ukusetshenziswa kwe-USB kunganikezwa khona, ungawaxhuma ngaphandle kwe-Bluetooth.
Ukusetha i-router kusuka kuthebhulethi nocingo
Kuthiwani uma uthenge i-Wi-Fi router ukuze ushaye i-intanethi kusuka kudivayisi yakho yeselula, kodwa awunawo ikhompyutha noma i-laptop ukuze uyibeke? Ngesikhathi esifanayo, noma yikuphi imfundo iqala ngalokho okudingeka ukwenze ku-Windows bese uchofoza, qalisa isiphequluli nokunye. Eqinisweni, i-router ingalungiselelwa kalula kusuka kuthebulethi ye-Android ne-iPad noma ifoni - futhi ku-Android noma i-Apple iPhone.
Okuthandwa kakhulu yi-archiver ethandwa kakhulu njenge-WinRar yesikhulumi se-Windows. Ukuthandwa kwalo kuqondakala kahle: kulula ukuwasebenzisa, ukucindezela kahle, ukusebenza nezinye izinhlobo zezinqolobane. Bheka futhi: zonke izihloko mayelana ne-Android (ukulawula okude, izinhlelo, ukuvula) Ngaphambi kokuhlala phansi ukubhala lesi sihloko, ngibheke izibalo zamasevisi okucinga futhi ngiqaphele ukuthi abaningi bafuna i-WinRAR ye-Android.
Indlela yokulawula ikhompyutha ngefoni ye-Android noma ithebhulethi, kanye ne-iPhone ne-iPad
Ezinsukwini ezimbili ezedlule, ngibhale isibuyekezo sehlelo le-TeamViewer elikuvumela ukuthi uxhumeke kudeskithophu eyikude futhi ulawule ikhompyutha ukuze usize umsebenzisi ongenamakhono axazulule ezinye izinkinga noma afinyelele amafayela azo, amaseva asebenzayo nezinye izinto ezivela kwenye indawo.
I-Android 5 Lolipop - isibuyekezo sami
Namuhla kusibuyekezo sami se-Nexus 5 kuya ku-Android 5.0 Lolipop sifikile futhi ngigijimela ukwabelana ngombono wami wokuqala ku-OS entsha. Uma kungenzeka: ifoni ene-stock firmware, ngaphandle kwempande, isethwe kabusha kuzilungiselelo zedivayisi ngaphambi kokubuyekeza, okungukuthi, i-Android ehlanzekile, ngangokunokwenzeka. Bheka futhi: Izici ezintsha ze-Android 6.
https://termotools.com zu.termotools.com © Amadivayisi weselula 2019